တတိယမြောက်သမီးတော်: ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာန ကွာခြားချက်များ
အမရေ.. လာရောက်ဖတ်မှတ်သွားတယ်နော်.. မသိတာလေးတွေလဲသိသွားတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်.. ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်းလည်း သိထားသင့်ပါတယ်..ဒိ့ထက်မက လည်းမျှဝေပေးနိုင်ပါစေနော် :)
အစ်မရေ အလည်လာရင်းပိုစ့်ကောင်းလေး ကို မှတ်သားသွားပါတယ်
ဗုဒ္ဓဘာသာ ၀င်တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အရာလေးပါ
ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်တဲ့အတွက် မှတ်သားသွားတယ်နော်
ဟိုရက်ကပဲ မိတ်ဆွေတစ်ယောက်နဲ့ ဒီအကြောင်းလေး ပြောဖြစ်နေသေးတယ်။ မြတ်က ဘာသာရေးစာပေတွေနဲ့ နည်းနည်း အလှမ်းဝေးတော့ မိတ်ဆွေက ရှင်းပြပေးနေတာပါ။ အခု သမီးတော် ရေးထားသလို ထေရဝဒက ဘုရားဟော တရားကို လုံးဝမပြုပြင်ထားဘူး၊ မဟာယနကတော့ သူတို့ မကြိုက်တာ ဖြုတ်တယ်၊သူတို့ဖြည့်ချင်တာ ထပ်ထည့်တယ်လို့ အကြမ်းမှတ်ဖို့ ရှင်းပြလိုက်တယ်။ အခု ဒီဆောင်းပါးလေးကို သေသေချာချာ ထပ်ဖတ်သွားပါတယ်။
၀မ်းသာပါတယ် မြတ်ရယ် ကိုယ်ကျိုးအတွက်ရေးတာမဟုတ်ဘူး
လိုလားသူတွေအတွက် အသုံးဝင်အောင် ဒီဘလော့လေးကို
တည်ဆောက်ထားတာ လူတိုင်းကတော့ လေ့လာတယ်ဆိုပေမယ့်
သမီးတော်ကိုယ်တိုင်လည်း လေ့လာရင်းနဲ့ မျက်စိလည်နေတာတွေအများကြီး
ရှိနေသေးတယ် သိသမျှတော့ မျှဝေ နေပါအုံးမယ်
ကူးယူပြီး ref ပေးခဲ့မယ်နော် ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ၊ ဗဟုသုတအများကြီးရလိုက်လို့။
Pyae Phyo has leftanew comment on your post "ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာန ကွာခြားချက်များ":
ကျေးဇူးပဲ အစ်မရေ.. လာလည်သွားပါတယ်.............။
မဟာယန ဘက်က အမြင်လေး ကိုရေးပြရင် ပို ဗဟုသုတတိုးမယ်နော်..
မဟာယန ဆရာတော်တွေက ထေရ၀ါဒကို ဘယ်လို မြင်လဲဆိုတာပေါ့
10:12 PM (10 hours ago)
Anonymous has leftanew comment on your post "ထေရ၀ါဒ နှင့် မဟာယာန ကွာခြားချက်များ":
သာဓု ..သာဓု သာဓု. ပါ
Zayar Lin said...
အခုလိုသိခွင့် ရလို့ ကျေးဇူးပါနောက်ထပ်လည်းမဟာယာနရဲ့ အကြောင်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့် သိချင်ပါသေးတယ် တကယ်လို့ ရှာဖွေလို့ ရရင်လည်းတင်ပေးပါအုံးဗျာ...
thaw dar said...
thank for all the detail post. will visit your blog more often. thank again.